Trump Administration dia mamaly an'i Korea Avaratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Fanavaozana ny tanjon'ny dia » Trump Administration dia mamaly an'i Korea Avaratra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Guam • Vaovao farany momba ny Korea Avaratra • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Aogositra 16, 2017
Ny Office of Security Guam Homeland Security and Defense Civil (GHS / OCD), miaraka amin'ny Mariana Regional Fusion Center (MRFC), sy ireo mpiara-miombon'antoka federaly sy miaramila, dia manohy manara-maso ireo zava-nitranga tato ho ato momba an'i Korea Avaratra sy ny hetsika nandrahona azy ireo. Mijoro mafy sy mafy orina ny birao amin'ny fanambarana nataony teo aloha momba ity toe-javatra misongadina ity.
Tamin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny Office of the Secretary of the Press, White House, tamin'ny 14 Aogositra lasa teo, ny sekreteran'ny fiarovana Jim Mattis sy ny sekreteram-panjakana Rex Tillerson dia nanambara hoe: "Mampamoaka an'i Pyongyang izahay."
"Ny fanambarana nataon'ny sekretera Mattis sy ny sekretera Tillerson dia manome fahitana fa mampihatra tsindry ara-diplomatika sy ara-toekarena amin'i Korea Avaratra i Etazonia," hoy i George Charfauros, mpanolotsaina momba ny fiarovana any an-toerana Guam. “Manaiky an'io fomba io izahay ary mijoro miaraka amin'ny fanambaran'ny Sekretera roa tonta. Na dia mivavaka aza izahay mba hahazo ny diplaomasia anio, izahay koa dia hampamoaka an'i Pyongyang noho ny fihetsik'izy ireo izay mifanohitra amin'ny zavatra fantatsika fa mety indrindra ho an'ny faritra sy izao tontolo izao. Ampamoahinay izy ireo amin'izay mety hanimba na hanimba ny nosinay sy ny sisa amin'ny Maria. ”
Ho valin'ny fandrahonana nataon'ny filoha Trump, ny tafika Korea Avaratra dia nanambara tamin'ny herinandro lasa teo fa amin'ny tapaky ny volana aogositra dia handefa drafitra ho an'i Kim Jong-un, mpitarika Korea Avaratra izy, noho ny fandefasana balafomanga balafomanga efatra any amin'ny rano manodidina an'i Guam, faritany amerikana izay no fonenan'ny toby miaramila amerikana.
Andriamatoa Kim dia nandinika ny drafitra tamin'ny alatsinainy ary nilaza fa hiandry kely izy alohan'ny hitenenana amin'ny tafika mba hanohy ny fandefasana balafomanga.
Notaterin'ny masoivohon'ny gazety afovoany koreanina: "Nilaza izy fa voahidy tamin'ny vozony ny imperialista amerikana noho ny tsy fitovian-kevitry ny fifandonana tamina miaramila, ary nilaza izy ireo fa hijery kely ny hadalana sy hadalana ataon'ny Yankees."
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa amin'ny GHS / OCD Public Information Officer Jenna Gaminde ao amin'ny (671) 489-2540 na amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny [email voaaro]